kwi-Italy - ngokwamalungelo ukuziphatha - kwaye diplomatic - IVIDIYO INCOKO - EWE!
kwi-Italy - ngokwamalungelo ukuziphatha - kwaye diplomatic
Usapho yeyona nto ibalulekileyo isizalwane kwi-Italy
I-conquest ka-inkcubeko, Italy ngu elikhulu imvelaphi ikratshiImagination, imagination, iingqiqo kunye nemfundo ingaba valued. Personal budlelwane nabanye ngabo uthembekile kulinywa kunye loyalty, nto leyo ingakumbi valued kwiintsapho. I-conquest ka-inkcubeko, Italy ngu elikhulu imvelaphi ikratshi. Imagination, imagination, iingqiqo kunye nemfundo ingaba valued. Personal budlelwane nabanye ngabo kulinywa elungileyo ukholo, kunye loyalty, nto leyo ingakumbi valued kwiintsapho. Shukumisa izandla kunye wonke umntu akhoyo-amadoda, abafazi, nabantwana - ngethuba isiganeko okanye uluntu ntlanganiso. Shukumisa izandla xa ushiya. Sebenzisa amagama efanelekileyo kwaye amaphawu de yakho isi-Italian inginginya okanye basebenza nabo ndimbuza ukusebenzisa amagama abo. Abafazi phantse rhoqo sebenzisa zabo maiden igama, ingakumbi abarhwebayo kwaye amaxwebhu asemthethweni.
Mna idla sebenzisa watshata amagama okanye umdibaniso watshata kwaye maiden amagama ngaphandle inkampani.
Prussia thatha punctuality ngalo mcimbi iintlanganiso kakhulu seriously, kwaye silindele kuwe ukwenza efanayo umnxeba nge-i-inkcazo ukuba ufaka emva kwexesha. Deliberate ppp ishishini sibonwa sloppy. Ushishino amakhadi ingaba exchanged kuphela ngomhla intlanganiso yokuqala kwaye kufuneka azale ukuba abamkeli, hayi baphoselwe kubo. Musa ukunika kushishino ikhadi omnye umntu ngaphezu kwakanye. Xa ufumana ishishini lekhredithi, khangela ngenyameko ngalo igama layo kwaye isihloko, kwaye kwangoko balibeke kwi-ithebhule kwi-phambili wena okanye yakho purse. Ukwakha personal ubudlelwane Prussia. Prussia njenge ukumelana abantu baye bamazi kwaye trust. Abo bakholisa ukuba bacinga ukuba umsebenzi ayiyo mthwalo okanye kufanele ukuthathelwa kakhulu seriously. Pragmatism kwaye talent kuba improvisation ingaba izitshixo ukuba impumelelo. Umthetho imithetho umbutho ingaba rhoqo sukuyihoya. Isi-Italian iinkampani ngokukhawuleza ukufumana kwaye ukuxhaphaze zabo niche ngaphandle ukwenza umsebenzi kwi-ubunzulu uphando. Injongo yesicwangciso-zikhona izicwangciso kuyanqaphazekaarely ebhaliweyo kwaye ingaba zange elide. Ushishino izigqibo ingaba rhoqo made kwaye negotiated ngasese phambi iintlanganiso. Injongo intlanganiso rhoqo ukuhlola isimo, zimvo lomgaqo-inkxaso, kwaye amanzi ubungqina, kunokuba izigqibo. Cocktails asingawo ngokufanayo kwi-Italy. Besela ngaphandle kokutya ngu rare. Okuphakathi besela ngu unusual kwaye hayi appreciated.
Nkqu encinci izilwanyana nabantu sibonwa epheleleyo. Abafazi musa ukusela kakhulu kwi-Italy. Xa ufuna zenziwa amehlo, beka knife kwaye ukubuyisa (amazinyo phezulu) kwi-icala plate: Indawo. I-hlula, kufuneka ekhohlo kwaye knife ngasekunene - ekunene, i-ukungasebenzi kufuneka iyonela kububanzi bephepha i-hlula. Italy sesinye ibaluleke kakhulu centers of European fashion.
Prussia ingaba gorgeous.
Nkqu nabantu amancinane ezinemigodi ukuchitha kakhulu imali kwi zabo wardrobe kwaye soloko dress kakuhle.
Amadoda nabafazi dress traditionally kwaye formally kuba ishishini izizathu (abantu: jacket kwaye tie, abafazi: suits okanye suits). Abafazi kufuneka wear abafazi zeegusha. Ukwabelana izipho idla akwenzeki ekuqaleni ishishini iintlanganiso, kodwa kucetyiswa ukuba kufumana isipho yakho pocket ukuba yakho isi-Italian guests umyeke ngaphandle. Prussia ingaba vula, komhlaba kwaye tolerant kwezinye eyodwa iimpawu manners. Banako tolerate delays, inefficiency, kwaye honest iimpazamo, kodwa ke, musa njenge arrogance kwaye rudeness. Langaphandle nabafazi banako ukwenza ushishino kwi-Italy ngaphandle kakhulu ubunzima. Phantsi ezithile iimeko, ekubeni umfazi unako kanjalo uqwalaselwe i-luncedo. E-umzantsi nabasebenzi kwimakethi ngabo kuphela isi-Italian abafazi, nto leyo elona nani liphantsi umyinge kwi Entshona Yurophu. Embalwa kuphela abafazi bamba yabalawuli izikhundla. Prussia Jikelele asingawo inhibited xa oko iza ubudlelwane opposite sex. Flirting yinxalenye ye-Italian indlela ubomi. Adapted ukusuka mathiriyali yesebe eqokelelweyo yi-Finestra sul Mondo, emnqamlezweni-yenkcubeko uqeqesho kwaye kokubonisana inkampani. Ekuqaleni ngokusekelwe imathiriyali ukusuka incwadi Beka uphawu lwakho eyona futhi phambili.
Ulwazi Kwaye unxibelelwano Kunye icacile Kwindawo
Gratuit la O întâlnire Cu femeile De la Ivanovo
ezimbalwa ividiyo Dating esisicwangciso-mibuzo roulette-intanethi kunye yefowuni yakho ngaphandle esisicwangciso-mibuzo roulette kwi-intanethi ngaphandle Dating for free kuba ezinzima budlelwane nabanye ividiyo Dating abafazi-intanethi esisicwangciso-mibuzo roulette ne-girls ikhangela umntu kuba ezinzima budlelwane ividiyo ukuncokola nge-girls simahla kwaye ubhaliso free incoko ividiyo Dating ungathanda ukuba ahlangane ads